Hawaasni Oromoo Viktooriyaa Torbee Diyaaspooraa Wayyaanee morman.
Date: August 4, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 04 Hagayya 2015) Ummanni Oromoo qabeenyaa saamamaa, q’eesaarraa buqqa’ee dhiitamaafi ajjeeffamaa wayita jiru kanatti, hawaasni Oromoo maqaa diyaaspooraatiin biyyatti galan yeroo gabrummaa dheeressuu malee gaaffii bilisummaa Oromoo kan hin dhaabsifne taúun dubbatame.
Hawaasti Oromoo biyya galanii dachii uummatichaa fudhatan akeeka gabroomfataa kanneen raawwachiisan akka ta’anillee hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa, Viiktooriyaa, marii Adoolessa 25 bara 2015 taasisan irratti hubachiisaniiru.
Obbo Yaadataa Sabaa, Pirezidaantiin Waldaa Hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa, Viktooriyaa, yaada kennaniin, hawaasni Oromoo maqaa diyaaspooraatiin biyyatti galee jiru, hawaasa Oromoo biyya alaa kan bakka bu’u akka hintaaneefi kanneen dantaa mataasaaniif fiigan akka ta’e ibsanii, gochi akkasii dararaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoorran ga’u dagachuu ta’uusaa dubbataniiru.
Obbo Shangalee Alii gamasaaniitiin akka jedhanitti, hawaasni Oromoo maqaa diyaaspooraatiin gara biyyaatti galee dantaawwan muraasaan sobamuusaa eeranii, tooftaa Mootummichaa uummata Oromoo walnyaachisuuf carraaqullee deeggaruu akka ta’e dubbataniiru.
Yaadni hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa, Viktooriyaa kun akka armaan gadii ti.
Previous Previous post: Itiyoophiyaa fi Yugaandaan Waliigaltee Ittisaa Toftan
Next Next post: Hidhamtooti Siyaasaa Oromoo Shan Gadhiifaman!